Izembatho Zezokwelapha, Izingubo Zangaphandle, Izingubo Zokusebenzela - qiangwei
I-DREAMQZ Chemical inephothifoliyo yomkhiqizo ebanzi efaka ama-polymers, ama-monomers,
imikhiqizo eyisisekelo ye-petrochemical, nemikhiqizo ye-megatrend futhi ikhula iba yinkampani yamakhemikhali yeGlobal
ngokuya ngezinsizakusebenza zokukhiqiza ezisezingeni lomhlaba kanye nokwenziwa kwemali ezinzile.
Izingubo eziningi ezenziwe ngokwezifiso
I-China isibe ngumkhiqizi wezimpahla wezingubo omkhulukazi futhi othumela izinto kwamanye amazwe
Kusukela ukungena kweChina ku-WTO, izindwangu nezingubo sekube yingxenye ebalulekile yokuthunyelwa kweChina emazweni angaphandle. Kule minyaka eyishumi edlule, ngokuqedwa kancane kancane kohlelo lwezabelo ezithunyelwa kwamanye amazwe, ukuthunyelwa kwezimpahla zaseTshayina, izindwangu nezimpahla zokugqoka kunendawo yangaphandle evulekile. Favora ...
Njengezwe elikhulu lokuthekelisa izingubo, inani laseChina lonyaka lokuthumela impahla ngaphandle lidlula izigidigidi eziyi-100 zamadola aseMelika, okuyinto enkulu kakhulu kunenani lokungenisa izingubo. Kodwa-ke, ngokuguqulwa kwesakhiwo sezomnotho saseChina eminyakeni edlule, imboni yezingubo iye yathenga kancane kancane yaba ...
I-China ngumthengisi omkhulu wezingubo, kepha insalela yokuhweba iyancipha
Njengomthengisi omkhulu wezingubo, iChina ithumela ngaphezulu kwezingubo eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ minyaka yonke, okungaphezulu kakhulu kokungeniswa kwayo ezweni. Kodwa-ke, ngokuguqulwa kwesakhiwo sezomnotho saseChina eminyakeni yamuva nje, imboni yezingubo iye yangena kancane kancane esigabeni esivuthiwe, kanti imikhakha yomkhiqizo ine-gr ...